ဒီစကားလေးကို ခနခန ကြားဘူးမှာပါ .. Virus တဲ့ ... | window က genius မဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေသူများ.. အတွက်ပါ ..Window loader 2.17 ~ ITmanHOME
06:50 နည်းပညာ No comments
ဒီစကားလေးကို ခနခန ကြားဘူးမှာပါ .. Virus တဲ့ ... | window က genius မဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေသူများ.. အတွက်ပါ ..Window loader 2.17
ဒီစကားလေးကို ခနခန ကြားဘူးမှာပါ .. Virus တဲ့ ...
ကိုယ်သုံးတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ error တစ်ခုခု ပြတာနဲ့ သုံးတတ်တဲ့ စကားလေးပါ ...
ပိာုဖိုင်ဖွင့်မရ ပိတ်မရ ... ( ဖွင့်မရတာက password ခံနေလို့ ... ပိတ်မရတာက exit ရှာမတွေ့လို့)
စက်လေးနေခြင်း ... ( ဒေါင်းလော့ဆွဲ / အကောင့် ၅ခုလောက် တစ်ပြိုင်ထဲဖွင့် / သီချင်းနားထောင်ပြီး video ကြည့်မိခြင်း )
အဲလိုဖြစ်တိုင်း virus ကိုလွှဲလွှဲချတတ်ပါတယ် .. ကွန်ပျူတာမှာ virus ၀င်ဖို့ဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေမှာ ခက်ခဲပါတယ် ..
တစ်ခါတစ်လေ ကျတော့လဲ လွယ်ပါတယ် .. ဘယ်အချိန်လွယ်လဲ ဆိုတော့
some မကောင်းသောဆိုက်များ နှင့် တွေ့သမျှလိုက်ဒေါင်းပြီး ကလိတတ်တဲ့ သူတွေကတော့ ထိမှာပါ ...
တစ်ခါတစ်လေကျတော့လဲ antivirus က မှားပြီး virus ထင်တာတွေလဲ အများကြီးပါ
ဥပမာ patch ဖိုင်တွေ ကိုပေါ့ .. registry တွေကိုလဲ error ပြတတ်ပါတယ် ...
ဒါပေမယ့် လွယ်လွယ်ဘဲ virus လို့ပြောလိုက်တာက အကျင့်ပါနေပြီ ..
ကျွန်တော်လဲ အခုချိန်ထိ virus လို့ ပြောကောင်းတုန်းပါ ... လူတိုင်းနီးပါးလဲ ပြောကြပါတယ် ..
အဲတော့ .. ပြောလက်စနဲ့ error မြင်ရင် virus လို့သာ ဆက်လှိမ့်ကြပါစို့လို့ ...
Window loader 2.17
window က genius မဖြစ်လို့ စိတ်ညစ်နေသူများ.. အတွက်ပါ ..
မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တယ် ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ..
ကျွန်တော် ရှာတုန်းကလဲ အသည်းအသန် ရှာခဲ့ရတာပါ.. တွေ့ပြန်တော့လဲ
Link သေနေတာနဲ့ တိုးတိုးနေတယ်.. ဒါကတော့ နောက်ဆုံး version လေးပါ..
အသုံးပြု့ရတာလွယ် လို့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်..
Software အမည် Window Loader 2.17
Minus Download Here